Sary Affinity dia azo alaina amin'ny Windows amin'ny endrika Beta ampahibemaso | Famoronana an-tserasera
Azo alaina ao amin'ny Windows izao ny Affinity Photo
Raha fantatsika fa amin'ny fanavaozana Windows lehibe manaraka, Microsoft hifantoka amin'ny lafiny famoronana bebe kokoa amin'ny rafitra Ny fiasa izay efa niaraka taminay nandritra ny am-polony taona maro, fa misy ny rindranasa izay efa tany Macs taloha tao amin'ny Windows, toy ny Affinity Photo, dia vaovao be ho an'ireo izay tia ity OS ity fa tsy Apple.
Sary Affinity, toy ny Affinity Designer ihany, vao navotsotra noho ny misintona amin'ny beta ho an'ny daholobe misokatra. Maneho ny fotoana voalohany ahazoan'ny mpampiasa PC ity mametraka ny tànany amin'ny tonian-dahatsoratry ny sary matihanina nahazo loka, izay tsy misy afa-tsy ho an'ny Mac ihany.
Miaraka amin'ny kinova Windows anao lalao amin'ny endri-javatra amin'ny an'ny Mac, izay misy valiny amin'ny fotoana tena izy, fanitsiana tsy manimba, fanodinana RAW ary fitantanana loko farany-to-farany ho fenitra. Ny Affinity Photo dia programa iray izay hanome anao ny marina sy ny kalitao ilaina mba hamoronana sary tsara tarehy avy amin'ny solosainao.
Amin'ny beta, ity kinova ity dia misy fiasa maromaro azo alaina ho an'ny fanavaozana lehibe ny Affinity Photo. Ireo endri-javatra ireo dia fialamboly HDR mandroso izay mamokatra sary mitanjozotra feno 32-bit, mifantoka amin'ny fametahana ny sary mitambatra marobe, fanodinana fandroana ho an'ny fandehanan'ny asa haingana ary inona no fomba vaovao hanovana sary amin'ny 360 degre.
Ashley Hewson, Talen'ny Affinity dia nilaza hoe:
Rehefa nanomboka namolavola ny fampiharana Afiinity izahay fito taona lasa izay, iray amin'ireo lakile ireo mifantoha amin'ny maha-sehatra maro, ka dingana lehibe ho antsika ity beta ity. Satria nanao io drafitra io hatramin'ny voalohany izahay, ny kaody back-end rehetra misy antsika, ny ampahany lehibe amin'ny motera Affinity, dia mahaleo tena tanteraka amin'ny rafitra fiasa.
Tsy midika fotsiny izany fa ny mifanentana amin'ireo sehatra roa ireo dia tonga lafatra 100%, fa ny mety rehetra, ny fahombiazana, ny fitaovana ary ny fametrahana ny mari-pahaizana nampalaza ny programa tamin'ny Mac, eo koa izy ireo miandry ny mpampiasa Windows.
Azonao atao midira amin'ny fisintomana beta avy amin'ny Affinity Photo avy amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Azo alaina ao amin'ny Windows izao ny Affinity Photo
Mba hisamborana sy hamantarana ny loko dia tsy misy tsara noho Pantone Studio